စရံအပျထားတဲ့ငှတှေေ ပွနျအမျးစရာမရှိတော့လို့ ဒုက်ခရောကျနရေတဲ့ တေးရေး တေးဆို ခိုငျမွဲသာ – Askstyle
စရံအပျထားတဲ့ငှတှေေ ပွနျအမျးစရာမရှိတော့လို့ ဒုက်ခရောကျနရေတဲ့ တေးရေး တေးဆို ခိုငျမွဲသာ
ပရိသတ်ကြီးရေ ဂီတမျိုးဆက်သစ်တွေကို အသံပိုင်းဆိုင်ရာ ပြသ သင်ကြားပေးနေသလို တေးရေး တေးဆိုအဖြစ် လူသိများတဲ့ အနုပညာရှင် ခိုင်မြဲသာကတော့ လတ်တလော ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ပရိသတ်တွေကို မျှဝေပေးလာခဲ့ပါတယ် ။
ဒီလောက်ငတ်နေတဲ့ကာလမှာ ရှားရှားပါးပါး အလုပ်တစ်ခုရပြီး ရေးရမယ် တီးရမယ် male + female Vocal ဆိုပေးရမယ်. Female အဆိုအတွက် ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး အိမ်မှာ zombie land ဖြစ်နေတယ်.ယူထားတဲ့ စရံငွေလည်း ပြန်အမ်းစရာမရှိတော့ဘူး . ထွက်ပြေးလို့လည်းမရဘူး အမေကအသည်းအသန်ဖြစ်နေတယ်. ကိုယ်တိုင်ကလည်း မသေနိုင်သေးဘူး.. ဘာလုပ်ရမလဲ ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ သူ့ရဲ့အခက်ခဲတွေကို ပရိသတ်တွေကို အသိပေးလာခဲ့ပါတယ် ။
ပရိသတ်တွေကတော့ မိဘလောက် ဘယ်အရာမှ အရေးမကြီးတဲ့အတွက် မေမေ့ကို ပဲ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ပေးဖို့အတွက် အိမ်ထဲကို အပြင်လူအဝင်မခံဖို့အတွက် အားပေးစကားတွေ မှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါတယ် ။ တေးရေးတေးဆို ခိုင်မြဲသာတစ်ယောက် အမြန်ဆုံးအဆင်ပြေဖို့ ဆုတောင်းပေးကြပါဦး ပရိသတ်ကြီးရေ ..။
Source : Khine Myel Ther
ပရိသတျကွီးရေ ဂီတမြိုးဆကျသဈတှကေို အသံပိုငျးဆိုငျရာ ပွသ သငျကွားပေးနသေလို တေးရေး တေးဆိုအဖွဈ လူသိမြားတဲ့ အနုပညာရှငျ ခိုငျမွဲသာကတော့ လတျတလော ကွုံတှနေ့ရေတဲ့ အခကျအခဲတှကေို ပရိသတျတှကေို မြှဝပေေးလာခဲ့ပါတယျ ။
ဒီလောကျငတျနတေဲ့ကာလမှာ ရှားရှားပါးပါး အလုပျတဈခုရပွီး ရေးရမယျ တီးရမယျ male + female Vocal ဆိုပေးရမယျ. Female အဆိုအတှကျ ဘယျလိုမှ မဖွဈနိုငျတော့ဘူး အိမျမှာ zombie land ဖွဈနတေယျ.ယူထားတဲ့ စရံငှလေညျး ပွနျအမျးစရာမရှိတော့ဘူး . ထှကျပွေးလို့လညျးမရဘူး အမကေအသညျးအသနျဖွဈနတေယျ. ကိုယျတိုငျကလညျး မသနေိုငျသေးဘူး.. ဘာလုပျရမလဲ ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ သူ့ရဲ့အခကျခဲတှကေို ပရိသတျတှကေို အသိပေးလာခဲ့ပါတယျ ။
ပရိသတျတှကေတော့ မိဘလောကျ ဘယျအရာမှ အရေးမကွီးတဲ့အတှကျ မမေကေို့ ပဲ ကနျြးမာရေးဂရုစိုကျပေးဖို့အတှကျ အိမျထဲကို အပွငျလူအဝငျမခံဖို့အတှကျ အားပေးစကားတှေ မှတျခကျြပေးခဲ့ကွပါတယျ ။ တေးရေးတေးဆို ခိုငျမွဲသာတဈယောကျ အမွနျဆုံးအဆငျပွဖေို့ ဆုတောငျးပေးကွပါဦး ပရိသတျကွီးရေ ..။